I-BLUMEDITERRANEO house, i-OLTREMARE efulethini - I-Airbnb
I-BLUMEDITERRANEO house, i-OLTREMARE efulethini
Marina di Ragusa, Sicilia, i-Italy
U-Laura uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Laura izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Casa Blumediterraneo iyindlu yangasese ebangeni elingamam angu-200 ukusuka ogwini, enamayunithi amathathu azimele: i-Oltremare, i-Celeste, i-Cobalto, engaqashiswa imindeni, hhayi amaqembu.
I-OLTREMARE, esitezi sokuqala, esingamamitha-skwele angama-40, yakhiwe: Igumbi lokuhlala-ikhishi elinombhede osofa ababili; igumbi lokulala eliphindwe kabili (kungenzeka ukwengeza umbhede owodwa); indlu yokugezela, etholakala egumbini lokuphumula, enendawo yokuwasha ngomshini wokuwasha; Izitezi ezi-2 zokubaluleka okukhethekile, ezingamamitha-skwele ayi-6 kanye namamitha-skwele ayi-15.
I-Casa OLTREMARE itholakala endaweni emaphakathi nendawo yolwandle ekhangayo yaseMarina di Ragusa, cishe amamitha angama-200 ukusuka ogwini, nethuba lokukhetha phakathi kwebhishi lamahhala noma indawo yokugeza, kanye naseLungomare, efinyelela cishe 4 km, luqhubeke ku umjikelezo futhi abahamba ngezinyawo endleleni, njalo phezu kolwandle, okuvumela izizinda emnandi. I-Lungomare iholela echwebeni lezivakashi noma esigcawini esikhulu, izindawo ezigcwele imigoqo, ama-pizzeria, izindawo zokudlela. I-Marina di Ragusa iklonyeliswe iminyaka ethile kokubili i-Blue Flag, ngenxa yolwandle lwayo oluhle oluhlanzekile, kanye ne-Green Flag, njengendawo elungele amaholide ezingane ngenxa yamabhishi ayo anesihlabathi kanye nezinkonzo ezinikezayo. Amathuba okuqasha amabhayisikili esizeni.
I-Marina di Ragusa icishe ibe ngamakhilomitha angama-25 ukusuka eRagusa nesifunda sayo se-baroque esiphakamisa i-Ibla kanye nezikhumbuzo zayo ze-UNESCO eziyi-18, cishe amakhilomitha angama-30 ukusuka eModica kanye ne-18 km ukusuka eScicli, amanye amadolobha ase-baroque anezikhumbuzo ze-UNESCO zeVal di Noto. Ziphinde zibizwe ngokuthi "izindawo zaseMontalbano", njengendawo yochungechunge lwethelevishini oluphumelele kakhulu. I-Marina iqhele ngamakhilomitha angu-8 ukusuka ePunta Secca, lapho "indlu yaseMontalbano" edumile ikhona.
Ngaphezu kwalokho, i-Marina di Ragusa ingaba isiqalo senombolo engapheli yohambo oluya ezindaweni ezihlukahlukene ezicebile ngobuhle bemvelo, bemivubukulo kanye nomlando-wobuciko baseSicily, njenge-Agrigento, iSyracuse, iCatania, iPalermo, njll ... Marina di Ragusa ijabulela isimo sezulu esipholile unyaka wonke futhi iyindawo ekahle kokubili kweholide lasehlobo elijabulisayo eduze nolwandle kanye neholide elithulile kunoma iyiphi enye inkathi yonyaka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Marina di Ragusa namaphethelo